Izinto omawuzithathele ingqalelo xa uQalisa isitishi sikaYouTube kwiSiteshi sakho sokuQala-YTpals
Yinyani eyaziwayo ngokubanzi ukuba iYouTube lelinye lawona maqonga asetyenziswa kakhulu ukusasaza ividiyo. Iqonga likhula ngokukhawuleza kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngelixa ngo-2017, iYouTube yayinabasebenzisi abasebenzayo abamalunga ne-1.86 yeebhiliyoni kwihlabathi liphela, eli nani lagqitha 2.3 yezigidigidi ngo-2020. Ezi zibalo zibonisa ukuba uYouTube ubonelela ngendawo enengeniso kumashishini amatsha ukuze aqalise ukukhula kwawo. Ithuba elinikezelwe nguYouTube lokuqalisa lininzi. Ungathumela iintengiso ukutsala abathengi okanye wenze izifundo kunye nendlela-kwiividiyo zeemveliso okanye iinkonzo zakho. Unokusebenzisa iYouTube ukunika ababukeli ukujonga ngasemva kweshishini lakho.
Ukuba ucinga ngokuqala ijelo leYouTube kwishishini lakho, ufike kwindawo elungileyo. Eli nqaku liza kugubungela iziseko zokuqala itshaneli yeYouTube. Emva koko, siya kukunika iingcebiso malunga nokusebenzisa iYouTube ukunceda ekukhuleni kweshishini lakho.
Uyenza njani itshaneli yeYouTube ukuze uqalise
Okulandelayo sisikhokelo senyathelo ngalinye sokwenza itshaneli yeYouTube yeshishini lakho -
inyathelo 1: Sayina ungene kuYouTube usebenzisa iakhawunti kaGoogle ekhoyo yeshishini lakho okanye wenze entsha. Le akhawunti kufuneka inikezelwe ngokuthe ngqo kwishishini lakho.
inyathelo 2: Ukusuka kwiphepha lasekhaya kuYouTube, unokuseta igama letshaneli yakho yokuqala yeYouTube.
inyathelo 3: Ungazalisa iinkcukacha ezongezelelweyo malunga neakhawunti yeshishini lakho.
inyathelo 4: Yenza i icon yetshaneli kwaye ubandakanye umsebenzi wobugcisa omele ishishini lakho.
inyathelo 5: Gcwalisa inkcazo yejelo lakho likaYouTube.
inyathelo 6: Cwangcisa umsebenzi kunye namatshaneli abonakalisiweyo.
inyathelo 7: Layisha umxholo.
Izinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe
Nangona ukwenza isitishi sikaYouTube kwishishini lakho kuyinkqubo elula ene-7, kukho izinto ezithile ekufuneka uziqwalasele ngelixa usenza isitishi sakho sikaYouTube.
1. Misela injongo yakho kuYouTube
Njengokuqala, yakho Isiteshi se-YouTube iya kuba nenjongo eyahlukileyo kunezinye iziteshi zikaYouTube. Kubalulekile ukumisela iinjongo zetshaneli yeYouTube kwasekuqaleni. Ngokufanelekileyo, iinjongo kufuneka zibe kukufumana izikhokelo ezininzi kwishishini lakho kunye nokuguqula izikhokelo ukwenza ingeniso engakumbi. Ungakhulisa izikhokelo ezifunyenwe kuYouTube ukongeza uluhlu lwakho lwe-imeyile. Olu luhlu lwe-imeyile lunokuthi emva koko luthumele izivumelwano, zakhe ubudlelwane, kwaye wabelane ngeendaba ezinxulumene noshishino.
2. Yenza uhlahlo lwabiwo-mali lwetshaneli yakho yeYouTube
Emva kokuba uzimisele usukelo lwakho, kubalulekile ukwenza uhlahlo lwabiwo-mali lwetshaneli. Oku kufuna ukugubungela izixhobo oza kuzisebenzisa ukwenza iividiyo kunye nokuba uya kufuna uncedo lokuqhuba itshaneli. Uhlahlo lwabiwo-mali lwakho luya kumiselwa luhlobo kunye nomgangatho womxholo ofuna ukuwuvelisa. Ukuba ufuna iividiyo ezikumgangatho ophezulu ezinexabiso elikhulu lemveliso, uhlahlo lwabiwo-mali lwetshaneli yakho yeYouTube luya kunyuka ngokwemvelo. Oku kungenxa yokuba kuya kufuneka unikeze inxalenye yohlahlo lwabiwo-mali lwakho kwiqela levidiyo kunye nabahleli oza kubaqesha, ngaphandle kwezixhobo ozithengayo.
3. Yenza iividiyo ngeebhetshi
Ukugcina ukuhambelana netshaneli yakho entsha yeYouTube, kungcono ukucwangcisa kwangaphambili. Phambi kokuthumela ividiyo yakho yokuqala kwisitishi, ingalicebo elihle ukuba neevidiyo ezilithoba ezilungiselelweyo. Xa ulungiselela umxholo kwiibhetshi ze-10, kuya kukuvumela ukuba usebenze ngokufanelekileyo kwaye unike ixesha lokugxila kwezinye iinkalo. Xa usebenza kwiividiyo zakho kwiibhetshi, iya kwenza uhambo lwakho lweYouTube lubonakale luncinci.
Ukwenza isitishi esitsha sikaYouTube kwishishini lakho kunokubonakala kulucelomngeni ekuqaleni, kodwa iinzame ezingaguqukiyo ziya kuvelisa iziphumo. Ukufumana uthethathethwano olufunekayo kubabukeli kudla ngokuba nzima kumajelo amatsha. Ukufumana ingqwalasela engcono kubabukeli, kubalulekile ukuphucula umlinganiselo wejelo lakho. Apha kulapho ababoneleli-nkonzo abathembekileyo bathanda khona YTpals inokukunceda. Sinoluhlu lweenkonzo zepremium zikaYouTube ezinokunceda ukukhulisa ijelo lakho. Unga thenga iiyure zokubukela zikaYouTube, iimbono, izinto abazithandayo, kunye nababhalisi abavela kwi-YT Pals, enceda ukwenza ialgorithm yeYouTube isebenzele wena. I-YTpals ibonelela ngesiqinisekiso sokhuseleko se-100% ngayo yonke inkonzo. Inkonzo idla ngokuqala kwiiyure ezingama-24 ukuya kwezingama-72 emva kokufaka iodolo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neenkonzo zethu, ungaqhagamshelana nenkonzo yethu yabathengi namhlanje!
Izinto omawuzithathele ingqalelo xa uQalisa isitishi sikaYouTube ngokuQala kwakho ngababhali beYTpals, 27 Disemba 2021
Isikhokelo sakho sokusebenzisa iiKhadi likaYouTube ngendlela eyiyo
Ukuba ujonga iindlela zokufumana ukubandakanyeka ngakumbi kwiividiyo zakho zeYouTube, sinento oyifunayo! Amakhadi e-YouTube sisixhobo esisebenzayo sokuthengisa isitishi sakho se-YouTube kunye nokuqhuba…
Iimbono eziPhezulu zokuma ngaphandle kwiYouTube
Inani labadali bemixholo likhula ngokucacileyo kwi-YouTube, kwaye phantse zonke i-niche ziyahlutha. Kwimeko enjalo, kuya kusiba nzima ngakumbi kubadali bemixholo emitsha ukwenza uphawu,…